भोलि जेठ २५ गते शनिबार, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल ! - Bigul News
जेठ २४, २०७६ Bigul TV
भोलि बिक्रम संवत २०७६ साल जेठ महिनाको २५ गते सनिवार तद अनुसार सन् २०१९ जुन ८ तारिख , तपाईको दिन कसरी बित्ला हेर्नुहोस तपाईको भोलिको राशिफल !
बिशेषगरि भोलिको दिन बिशेष संयमितताका साथमा अगाडी बढ्नु पर्ने छ। स्वजनका साथमा अनावश्यक मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्ला सावधान रहनु होला। मानसिक व्यग्रताको अनुभव हुनेछ। अनिन्द्राका कारण स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ। यात्रामा सकेसम्म ननिस्कदा नै राम्रो हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा पनि खासै सफलता मिल्ने छैन।
अपेक्षा गरे अनुरुपको कार्यमा सफलता मिल्नाले मनमा सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थताको अनुभूति हुनेछ। आर्थिक लाभ हुने सम्भावना रहेको छ। भाईबन्धुका साथमा सौहार्दपूर्ण समय रहेको छ। तर मध्यान्ह पश्चातको समयमा भने खर्चको मात्रामा केहि वृद्धि भएर जान सक्नेछ। मनमा उत्साह र उमंगमा कमि भएर जानेछ।
मनमा सकेसम्म नकारात्मक भाव आउनबाट बच्नुपर्ने छ। परिवारका साथमा अनावश्यक झैँ झमेला देखिन सक्छ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छैन। बिद्यार्थी वर्गका लागि पढाई लेखाईको क्षेत्रमा खासै सफलता मिल्ने छैन। मध्यान्ह पछिको समयमा भने नया कार्यको थालनी गर्ने उत्साह र हौसला मिल्नेछ। प्रतिष्पर्धाको बिचमा पनि सफलता हासिल गर्ने समय रहेको छ। फलदायी यात्राको सम्भावना रहेको छ।
स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। मनमा उत्साहक मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ। छोटो दुरीको यात्रा हुने सम्भावना रहेको छ। अनावश्यक खर्च हुनबाट बच्नु पर्नेछ। मनमा नकारात्मक भावना पैदा नदिनु होला। धार्मिक एवम आध्यात्मिक क्षेत्रमा नाम जानेछ।
महत्वपुर्ण निर्णय लिन नसक्दा कार्यमा खासै सफलता मिल्ने छैन। पारिवारिक कार्यको पछाडी धन खर्च भएर जानेछ। अनावश्यक झैँ झमेलामा सकेसम्म नाफस्दा नै राम्रो हुनेछ। प्रियजनसंगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छुने छ। सिंह राशी हुनेहरुका लागि भोलिको दिन शुभ फलदायी रहेको छ।
व्यापार व्यवसायको वातावरण अनुकुल रहेको छ। शारीरिक एवम मानसिक रुपमा स्वस्थताको अनुभूति हुनेछ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। उपयुक्त निर्णय लिन नसक्दा महत्वपुर्ण कार्य हात लागि भएर जाने छैन। बोलीमा संयमितता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। धनहानी साथ साथै मान हानि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेको छ। मानसिक स्वस्थतामा वृद्धि भएर जानेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक लाभ हुने सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। सन्तान सुख मिल्ने छ। आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ।
शारीरिक एवम मानसिक स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। विदेश निवासी आफन्तजानका मार्फतबाट शुभ समाचार सुन्न पाइने छ। धार्मिक यात्रा हुन सक्नेछ। आर्थिक लाभको सम्भावना रहेको छ। कार्यमा सफलता मिल्नेछ। माताको सहयोग प्राप्त हुनेछ। मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। पारिवारिक वातावरण आनन्दमय रहेको छ।
दिनको सुरुवाती अवस्थामा स्वास्थ्यमा केहि समस्या देखा पर्न सक्नेछ। आर्थिक अभावको समस्या देखा पर्न सक्ला। मनमा नकारात्मक भाव पैदा भएर जानेछ। मध्यान्ह पश्चातको समयमा भने स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ। आकस्मिक धन प्राप्तिको योग रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ हुनेछ। यात्राको सम्भावना रहेको छ।
परिवारजनका साथमा सुखद यात्राको सम्भावना रहेको छ। अनावश्यक क्षेत्रमा धन खर्च हुनाले आर्थिक मन्दी देखा पर्ने छ। सरकारी पक्षबाट खासै सफलता मिल्ने छैन। मनमा अनैतिक प्रवृति आउनबाट बच्नु पर्ने छ। समग्रमा मकर राशी हुने हरुका लागि भोलिको दिन शुभ फलदायी रहेको छ।
परिवारमा सुख शान्ति छाउने छ। शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थताको अनुभव हुनेछ। बाहनसुख प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। नयाँ बस्त्राभुषण खरिद गर्ने सुखद समय रहेको छ। लामो तथा छोटो दुरीको यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
कसैको साथमा अनावश्यक बादविवाद र बौद्धिक चर्चामा नाफस्दा नै राम्रो हुनेछ। नया कार्यको थाले गर्नका लागि समय खासै अनुकुल रहेको छैन। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ प्राप्त भएर जानेछ। प्रतिष्पर्धाका बिचमा पनि सफलता हासिल गर्ने समय रहेको छ। समग्रमा मिन राशी भएकाहरुका लागि भोलिको दिन सुखद रहेको छ।
प्रकाशित : शुक्रबार, जेठ २४, २०७६१८:२८
असार महिना सबै भन्दा कुन राशिको लागि शुभ रहला ? हेर्नुहोस् असार महिनाको मासिक राशिफल !